Osisi ọka Peking kabeeji: ya na ọkụkọ, crackers, cucumber, egg, tomato, nshịkọ osisi, ọka, cheese, peas, ntụziaka dị mfe ma dị ụtọ na foto ha - Akwukwo nri - 2020
Nri nri nke Peking kabeeji na àkwá maka uto ọ bụla: na ọkụkọ, crackers, cucumber na ngwaahịa ndị ọzọ
Ihe oriri ekwesịghị ịbụ naanị ihe tọrọ ụtọ, kama ọ dịkwa mma. Na-eri nri ngwa ngwa na ihe oriri dị mma, anyị na-ama onwe anyị ikpe ka anyị buru ibu oriri calorie na beriberi. Ya mere, ichebara nri gị echiche, onye ọ bụla kwesịrị ilekọta nri kwesịrị ekwesị, nke ga-agbakwunye ume na ike.
Vitamin C dị oké mkpa maka ahụ ma dị mkpa iji wusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Na Beijing kabeeji nwere ya n'ụba, nke ọ karịrị ọcha kabeeji. Iri Peking kabeeji, onye na-agwọ ọrịa ahụ, na-alụso ọrịa obi na ọrịa ọgụ na ọrịa strok peptic, mgbe nrụgide, mgbaze na metabolism na-edozi.
A na-ahụ kabeeji dị otú ahụ na nri dị iche iche nke ọgwụgwọ dị iche iche. Ejila uzo vitamin a na nri nri. Akwụkwọ kabeeji Beijing dị ka letus, ya mere a na-ejikarị ya na sandwiches na salads.
Ntụziaka nke ụzọ nnu nke Quail
Ntụziaka dị mfe ma dị ụtọ nke nwere ọtụtụ ihe dị iche iche na foto ha
Na crackers na ọkụkọ
Na nshịkọ na ọka
Na anụ ọkụkọ
Na mkpụrụ na apụl
Kedu esi esi esi nri na-esi nri ndị Chinese?
Ị ga-enwerịrị ihe ndị na-esonụ:
Peking kabeeji 100 grams.
Sie anụ ọkụkọ 2 iberibe.
Green eyịm 10 feathers.
Nri kukumba gram 80.
Nnu nụrụ ụtọ.
Oliv mmanụ 1-2 tablespoons.
Nri bara uru nke efere:
4.6 gr ọka.
7.2 g abụba.
Nzọụkwụ na-eme ihe ndị a:
Tinye àkwá diced.
Nnu ma jupụta na mmanụ, mix.
Na-eje ozi dika nri dị iche iche ma ọ bụ efere n'akụkụ na anụ.
Ngwurugwu Chicken dị iche na quail, uru nke ikpeazụ ahụ bụ karịa ọtụtụ, nke dị iche na nsen anụ ọkụkọ, ọdịnaya nke amino acid deficient maka organism a na-akpọ methionine.
Ihe nke ngwunye quail bụ eziokwu na ha adị ọhụrụ n'ihi nnukwu shells.
Chinese kabeeji 200g.
Quail nsen 4 PC.
Ọhụrụ nnukwu tomato 1 PC.
Kukumba 1 pc.
Dill 1 ụyọkọ.
Nri utoojoo maka mgbakwasa ma ọ bụ yogọt na-abụghị abụba.
Maka nri ị ga - achọ:
Na-asa ma na-amanye kabeeji epupụta herbs, iri.
Kukumba na tomato iri finely.
Fry àkwá, dina na akwụkwọ nri na elu.
Oge na ude ma ọ bụ yogọt, nnu nụrụ ụtọ.
Na efere a bara uru maka nri ụtụtụ, ọ na-edozi ahụ ma dị mma. Jirinụ nri ọka zuru oke rụọ ọrụ.
A na-ekesa nri ndị a na-ekpocha na Chinese kabeeji, a ga-eme ka akụkụ ahụ dị iche iche dịgasị iche ma gbakwunye ya, ọ na-ejikọta ya na ọtụtụ nri.
Kabeeji mkpụrụ osisi (250 g).
Achịcha ọcha (2-3 mpekere), bee n'ime cubes.
Tinye 2 cloves nke garlic.
Tinye anụ ọkụkọ (200g): sie ma ọ bụ na-ese siga.
Oge na nnu na ose, ị nwere ike itinye ọkacha mmasị gị ngwa ngwa.
Wunye ihe oriri nke utoojoo ude, Mayonezi, elu elu tutu na-eje ozi, ghara ikwe ka croutons belata.
Ọ dị mkpa:
Gbanyụọ akwụkwọ kabeeji n'okpuru mmiri na-agba agba ma gbue (185g).
Abụọ cucumbers dị ọhụrụ wụsara mmiri na-ekpochapu ma bepụ akpụkpọ ahụ, gbanye n'ime obere mpekere.
Ogbugba ocha (7-8 pcs.) Bee n'ime okirikiri.
Nnu, gwakọta ma fesaa ya na cheese chiri, jiri ya mee ihe n 'akwukwo nri.
220 gr crab anụ bee ibe.
Abụọ sie sie, nnukwu ịkpụ, ị nwere ike ebe.
Bekee kabeeji aka aka (3-4 epupụta).
170 g gwakọta ọka ọka mix na 1-2 cloves nke garlic.
Ghichapu otu obere yabasị ma gbakwunye ihe ndị fọdụrụnụ.
Na - eri ihe ma jupụta na abụba Mayone.
Saa kabeeji Peking 250 grams ma bee n'ime ibe ya.
Otu ite nke peas na-acha uhie uhie, kpofuo mmiri mmiri, gbakwunye na efere salad.
Ejicha uhie erimeri, tufuo uto uto ma fesaa ya na mmanya, nye ogwu.
150 grams nke soseji smoked bee n'ime ogologo Mpekere.
Ngwakọta niile juputara na jupụta na ude mmirimmiri ma ọ bụ Mayonezi, salted lightly.
Tomato tomato (6 iberibe), na-asa ma kewaa na ọkara mpekere.
Cabbage chaotically break, ọ ga-ewe banyere 250 grams.
Akwukwo Bulgarian: belata uhie uhie na odo n'ime cubes na ighe ya na otu ogwu.
A na-etinye oliv nwere ike n'ime ringlets (1 ite).
Wụsa na lemon na oge na soy ihendori.
Akpụchasị Feta n'ime cubes.
Cabbage iri ogologo oge.
1 ite nke olive oliv nwere ike ịkpụ n'ime ọkara.
Ụtọ ose 1 pc. bee n'ime ọkara yiri mgbaaka.
Nnu na ose, oge na mmanụ olive.
Fry sie anụ ọkụkọ anụ anụ na eriri odo, nnu na ose.
Mkpụrụ apricots a gwakọtara na-awụnye mmiri na-esi na mmiri ma na-ekwe ka ọ dị nro, mgbe ahụ igbapu ma gbue.
Uekere ogwukere 160 gr na-egbuchasị ya.
Abụọ anụ ọkụkọ na 100 grams nke cheeseum cheese grate.
Tinye nnu, ude uto.
Soseji, ọkacha mma na-ese anwụrụ 200 grams, bee n'ime ibe.
Peking kabeeji 140 gr, iri nnukwu.
Ọhụrụ kukumba 1pc, crumble n'ime cubes.
A ụyọkọ elu (dil, pasili, eyịm green) chopped finely.
Ngwunye sie ike, 2 pcs, peeled, bee n'ime mpekere.
Nnu na mgbakwasa ya na ude mmirimmiri na Mayonezi na oke 1: 1.
Maka nkwadebe nke salad mmiri ga-achọ:
Bee kabeeji banyere 250 gr.
Iberibe bill, pasili, basil.
Akụkụ 10 nke radish dị iche iche na-agba n'ime okirikiri.
Grate otu cucumber ọhụrụ.
Nnu nụrụ ụtọ ma tinye ude mmiri.
Obụpde 200 g nke amịrị na mmiri salted na ite atọ nke oji oji na akwukwo akwukwo, nke dị mma, na-eme ka anụ ghọọ eriri.
Tinye akuku kabeeji Chinese.
1-2 yabasị na carrots, na-agba aja aja na mmanụ aṅụ, gbakwunye ya na ihe ndị ọzọ.
A kụrụ kukumba ma ọ bụ pickled bee n'ime ibe.
Anụ ọka ma ọ bụ ndị ọkachamara na mkpọ mkpọtụ ma bee n'ime ebe.
Nnu nnu nnu nile, jupụta na mayonezi obere calorie.
Tinyere salads anụ na akwukwo nri, nkpuru gourmets nke afọ ọ bụla ga-enwe mmasị na ha.
Peking kabeeji floor kachana.
Apple ụtọ na utoojoo 2 PC.
Nri mkpụrụ 100g.
Yoghurt na-enweghị ihe kpochapụla.
Nnu, sugar nụrụ ụtọ. O kwere omume iji dochie mmanụ aṅụ.
Nri esi nri:
Saa na bee apụl, belata ya n'ime obere mkpa.
Peking kabeeji, kpochapu, belata, gbanyụọ nke ọma.
Peeled mịrị amị mkpụrụ na frying pan na-enweghị na-agbakwunye mmanụ maka ihe dị ka 3 nkeji.
Oge na yogọt, tinye nnu na shuga na tuo ma ọ bụ mmanụ aṅụ 2 tbsp.
Ka salad guzo maka minit 10.
Nhọrọ a bara uru maka okpokoro ezumike ụmụaka. Ma ndị okenye, ọ ga-adọta ya ọhụrụ na flavor ọnụahịa nke ngwaahịa.
Ejere òkè na nnukwu efere.
Raisin 150 gr.
Nri apricots nke nchara 110 gr.
Peking kabeeji 180 gr.
Omuma ma ọ bụ mkpụrụ osisi yogurt 250 gr.
Achọrọ n'oge nri:
Saa kabeeji, mkpụrụ na mkpụrụ osisi mịrị amị na akọrọ.
Bee ma gbanye apụl na ube n'ime ogologo oge.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị nwere ike ịgbakwunye dum, ma ọ bụrụ na achọrọ ya, aprịkọt apị na-ekewa na ọkara.
Cabbage finely iri.
Jupụta yogọt, jikọta ihe niile ma jee ozi.
Ọ dị mkpa icheta ịdị ùgwù nke kabeeji Chinese, dị ka obere ọdịnaya calorie ya. 100 gr. ngwaahịa naanị 16 kcal. Ọ bara ọgaranya na vitamin A, E, C, K, yana mineral dị ka calcium, potassium, ígwè, sodium, phosphorus, manganese, zinc, ọla kọpa na selenium.
Na mba anyị, ihe oriri a eguzobewo onwe ya ma chọpụta oke nkesa, aghọwo nke a ma ama. Na-echekwa otu akụkụ nke Peking kabeeji na friji, ekpuchi na-esere ihe nkiri, ya mere echekwaara ohuru ohuru na mmiri ara ogologo oge.